Maxkamadda sare ee Israa'iil oo amar ku bixisay in la dumiyo tuula ay leeyihiin Falastiyiniin - BBC News Somali
Maxkamadda sare ee Israa'iil oo amar ku bixisay in la dumiyo tuula ay leeyihiin Falastiyiniin
25 Maajo 2018
Maxkamadda Israa'iil ayaa sheegtay in dadka reer falastiin ee deggan tuulada Khan Al-Axmar loo rari doono meel kale, balse dadka qorshahaasi Israa'iil dhaliilsan ayaa sheegaya in arrintani ay ka dhigan tahay in khasab lagu rarayo dadka tuuladaasi deggan.
Tuuladan ayaa ku taal qeyb ka mid ah dhulka ay Yuhuudda xoogga ku haysata ee daanta galbeed oo loo arko in uu yahay mid istaraatiiji ah oo u dhaxeeyo deegaannada Israaiil ee u dhow waddada weyn ee gasha magaalada Quddus.
Bedawiyiinta reer Falastiin ayaa tuuladaasi ku noolaa tan iyo 1950-meeyadii, waxaana tuuladaasi ku yaal iskuul ay dhistay hay'ad samafal oo laga leeyahay dalka Talyaaniga.
Dowladdaha reer yurub ayaa aad uga soo horjeesaday in la dumiyo tuuladan, waxaana sarkaal sare oo British ah oo dhawaan halkaasi boqoday uu sheegay in qorshaha Israa'iil ee lagu duminayo tuuladani uu yahay mid aad looga walaaco.
Go'aanka maxkamadda ayaa yimid kaddib markii wasiirka gaashaandhigga Israa'iil uu shaaciyay in 2,500 oo guri oo cusub dadka Yuhuudda ahi looga dhisi doono daanta galbeed.
Marka la eego shuruucda caalamiga ahi, deegaannada ay Israa'iil halkaasi ka dhiseyso ayaa loo arkaa sharcidarro, inkastoo Israa'iil ay arrintaasi ku gacan seyrtay.
13 Agoosto 2020
Biden maka guuleysan karaa Trump?
Kiisaska Corona virus ee daafaha caalamka
6 Luulyo 2020
Kamala Harris"Ameerika waxay u ooyayasaa hoggaamin"
Waa sidee xaaladda Sanjay Dutt oo isbuucan laga helay cudurka kansarka?
12 Agoosto 2020
Tallaalka corona ee Ruushka uu soo saaray "oo hadda loo adeegsan karo daweyn"
11 Agoosto 2020
Cali Xuseen: “Dadkii la tooganayay ayaan ku jiray si mucjiso ah ayaana ku badbaaday”
10 Agoosto 2020
Nin dharka xayeysiin jiray oo Uighur ah ayaa muuqaal dhif ah ka soo diray xabsi Shiinaha ah dhexdiisa
'Sawirkii iga eryay shaqadii ugu fiicnayd ee aan abid helay'
31 Luulyo 2020
Sidee Kamala Harris u caawin kartaa ama u dhaawici kartaa Joe Biden
Sidee looga gudbi karaa caqabadaha haysta hannaanka waxbarasahda Soomaaliya?
"Waxay igu tilmaameen qof waalan markii aan u sheegay inaan shirkad furanayo"
Muxuu yahay cudurka 'ay basasha sababtay' ee ka dillaacay Mareykanka?
Waa kuma ninka tartanka adag la galay Ilhaan Cumar?
© 2020 BBC. BBC masuul kama ahan macluumadka bogagga kale ee dibadda. Akhri xogta ku saabsan sida aan u abaarno bogagga dibadda.